खेलकुद Archives - Page3of 23 - Nepalpath.com : A complete news site
टि-२० ‘बी’ विश्वकप छनाेटः म्यानमारलार्इ ८ विकेटले हराउदै नेपालकाे सानदार सुरूवात
काठमाडाैं ।मलेसियामा जारी टी- २० ‘बी’ विश्वकप छनाेट क्रिकेटकाे पहिलाे खेलमा म्यानमारलार्इ ८ विकेटले हराउदै नेपालले सानदार सुरूवात गरेकाे छ। नेपालले पहिलाे विकेट भने दास्राे बलमै गुमाएकाे थियाे । नेपालमा प्रदिपसिंह एेरी दाेस्राे बलमै अाउट…
म्यानमारले नेपाललार्इ जितका लागी ३० रनकाे लक्ष्य दियाेः संदिपकाे ४ विकेट
काठमाडाैं । नेपाल मलेसियामा जारी टी- २० ‘बी’ विश्वकप छनाेट क्रिकेटकाे पहिलाे खेलमा म्यानमारलार्इ १० अाेभरमै अलअाउट गर्न सफल भएकाे छ । टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेकाे म्यानमारलार्इ नेपालले १० अाेभरमै २९ रनकाे स्थितीमा अलअाउट…
टी–ट्वान्टी विश्व कप क्रिकेट छनोटः नेपाल र म्यानमार भिड्दै
काठमाडौं । टी–ट्वान्टी विश्व कपअन्तर्गत एसिया छनोटको समूह ‘बी’ को खेलमा आज नेपालले म्यानमारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । मलेसियाको क्वालालम्पुरस्थित किनरारा ओभलमा नेपाल र म्यानमारबीचको खेल नेपाली समय अनुसार १२ बजेर १५ मा सुरु हुनेछ ।…
यू–१८ महिला साफ च्याम्पियनसीप फुटबलः आज नेपाल र बङ्गलादेश भिड्दै
काठमाडौँ । भूटानमा जारी यू–१८ महिला साफ च्याम्पियनसीप फुटबलमा आज नेपाल र बङ्गलादेश भिड्दैछन् । दुवै टोली सेमिफाइनलमा पुगिसकेकाले आज विजयी हुने टोली समूह विजेता र पराजित हुने टोली समूह उपविजेताका रुपमा सेमिफाइनलमा पुग्नेछन् ।…
बंगबन्धु गोल्डकपः आज साविक विजेता नेपाल र ताजिकिस्तान भिड्दै
काठमाण्डौ । बंगबन्धु गोल्डकपको नयाँ संस्करण सोमवारदेखि बंगलादेशमा सुरु भएको छ । साविक विजेता नेपालले आज ताजिकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । बंगलादेशको सिलेट डिस्ट्रिक्ट रंगशालामा हुने खेल नेपाली समयअनुसार साँझ सवा ६ बजेदेखि सुरु हुनेछ ।…
टी–२० विश्वकप छनोट क्रिकेट खेल्ने नेपाली टोलीको घोषणाः काे-काे परे टिममा?
काठमाडौं । मलेसियामा यही अक्टोबर ३ देखि सुरु हुने टी–२० विश्वकप क्रिकेट छनोटको एसिया उप–क्षेत्रीय छनोट प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने १४ सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गरिएको छ। टोलीमा लामो समयपछि प्रदिप ऐरीले स्थान बनाउन सफल भएका…
राष्ट्रिय फुटबल टोली बङ्गलादेशतर्फ, उपाधि उचाल्ने लक्ष्य
काठमाडौँ, १४ असोज । बङ्गलादेशमा हुने बङ्गबन्धु गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताममा सहभागी हुने राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई आज बिदाइ गरिएको छ । सातदोबाटोस्थित अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ ९एन्फा० कम्प्लेक्समा आयोजित कार्यक्रममा एन्फाका अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पासहित एन्फाका पदाधिकारीले…
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग आजदेखि शुरु
काठमाडौं। चार वर्षपछि हुन लागेको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग आजदेखि शुरु हुँदैछ। घरेलु फुटबल आन्तरिक किचलोमा फसेपछि चार वर्षदेखि स्थगित हुँदै आएको ए डिभिजन लिग आजदेखि शुरु हुन लागेको हो। रेलिगेशन नहुने प्रावधानसहित शुरु…
नेपाल र पकिस्तान अाज अामने सामने हुदैं…….
काठमाडौँ । साफ यू–१८ महिला च्याम्पियनसीपको पहिलो खेलमा नेपाली यू–१८ महिला टोली पाकिस्तानसँग खेल्ने तयारीमा जुटेको छ । भुटानको थिम्पुस्थित चाङलिमिथाङ मैदानमा नेपालले आज पाकिस्तानसँग खेल्ने छ । समूह ‘बी’मा रहेको नेपाल र पाकिस्तानबीचको खेल…
एसिया कपकाे उपाधिका लागि भारत र बंगलादेश भिड्दै
काठमाडाैं । युएईमा जारी एसिया कपको उपाधिका लागि भारत र बंगलादेश भिड्दै छन् । खेल नेपाली समय अनुसार साँझको पाँच बजेर १५ मिनेटमा हुँदैछ । सुपर चारको अंक तालिकामा बंगलादेश चार अंक सहित दोस्रो र…